Socodka Socdaalka ee Kooban Einstein | Dib -u -eegista Buugga 2022
Bogga ugu weyn Socodka Socdaalka ee Kooban Einstein | Dib -u -eegista Buugga 2022
Waxay dhacdaa mar walba. Iyagoo ku dhibtoonaya inay wax walba la socdaan, bini -aadamku waxay u muuqdaan inay iloobaan raashinka ay qaadan doonaan, goorta ay ballansan doonaan ballanta dhakhtarka, qaar baa xitaa illooba dhalashadii lamaanahooda.
Waxay u muuqan doontaa in inta xusuustayada maanta ay u egtahay mid ka mid ah kalluunka dahabka ah.
Isku dayga inaad xasuusato wax mar walba waa niyad jab, waxay u egtahay inaad isku dayeyso inaad god ku dhejiso gidaar shub ah oo baalal leh. Ma dhacayso.
Halkii aad kula kulmi lahayd derbiga madaxa, inkastoo ay waxyeello gaartay, joogso oo ka fikir. Ka waran inaan daaqad halkaas dhigno ama si fudud ugu dul soconno? Waxaad ogaan doontaa sida xitaa qof caadi ah uu u tababari karo maskaxdiisa inay xasuusato.
Iyada oo Moonwalking leh Einstein: Farshaxanka iyo Sayniska xusuusta wax walba, Joshua Foer ayaa ku bari doona taariikhda xusuusta.
Haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol xusuus leh, waa inaad noqotaa nooca qofka xusuusta inuu xasuusto.
Joshua Foer waa qoraa iyo suxufi madax bannaan oo leh laba shaqo oo la daabacay: “Moonwalking with Einstein” iyo “Atlas Obscura: Tusaha Baaraha ee Mucjisooyinka Qarsoon ee Adduunka”.
Siidaynta bilowga ah ee Moonwalking with Einstein ”waxay ahayd sanadkii 2011. Tan iyo markaas dad badan ayaa soo saaray jaceylka buugga. Tilmaamaha aan caadiga ahayn ee xusuusta, waxaa hubaal ah inay bixin doonto gacan -qabasho marka laga gudbo caqabadaha xagga xusuusta.
Waxay ka sheekaynaysaa dadaalkii Joshua Foer ee sannadka oo dhan si uu u xasuusto xusuusta, isagoo wax ka barta ciyaartooyda maskaxda adduunka ugu sareysa.
Adeegsiga farsamooyin maskaxeed qaarkood, buugani waa qasab inuu beddelo sida dad badani u ilaaliyaan xusuustooda. Ku soco dusha dayaxa dusha Joshua iyada oo ay weheliyaan halyeey sida Albert Einstein oo fur fur waxyaalaha qarsoon ee maanka aadanaha.
Xor ayaad u tahay inaad iibsato daabacaadda waraaqaha ah oo dheefso dhammaan 270 bog ee safarka Foer iyada oo loo marayo qarsoodiga maanka aadanaha.
Farshaxanka lumay ee mnemonics
Gudaha “Moonwalking with Einstein” Joshua wuxuu isku dayay intii karaankiisa ahayd inuu soo bandhigo qaar ka mid ah farsamooyinka ay iska indhatireen bulshada casriga ah marka ay timaaddo xifdinta iyo abaabulka sawir qaadeyaasha maskaxda.
Kaliya maahan inuu lahaa geesinimo uu ku muujiyo bannaanka, in kasta oo fikradaha dadka caadiga ah iyo kuwa caadiga ah, wuxuu sidoo kale helay inuu si fiican u sharraxo qayb kasta oo ka mid ah ganacsigan maskaxeed.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Probux 2022: Ma Xalaalbaa Mise Mid Kale Ayaa Lacag Ka Sameynaya Khayaanada Internetka
Akhri: Soo koobid Buug Faahfaahsan oo ah "Raadi Sababtaada" oo uu qoray Simon Sinek
Farsamooyinka xusuusta ee lagu soo bandhigay "Dayax -gacmeed lala Einstein
1. Qasriga xusuusta
Ahaanshaha muuqaalka ugu yaabka badan ee la soo bandhigay, qasriga xusuusta ayaa ah aalad mnemonic qadiimi ah oo ka faa iideysata sida ugu fudud ee aan u soo xusuusan karno macluumaadka, goob ahaan iyo muuqaal ahaanba. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan Habka Loci.
Fikraddu waxay ku saabsan tahay inaad ballan -qaaddo inaad xasuusato safar aad ku soo martay meel la yaqaan ka dibna aad isku xirato shay kasta oo ku jira liiska aad isku dayeyso inaad ku xafiddo bar -kantarool oo safarkaas ah.
Ku tarjun waxaad isku deyeyso inaad xasuusato sawirro oo ku kaydi meel aad si fudud ugu malayn karto maskaxdaada.
Tusaale ahaan, hal khabiir xusuusta ayaa farsamada u isticmaalay inuu ku xafido lambarrada Pi ilaa in ka badan 100,000 oo lambar.
2. Farsamaynta jeexitaanka
Chunking wuxuu naga caawiyaa aqoonsiga ereyada muhiimka ah iyo fikradaha, wuxuu kobciyaa awoodda qeexidda, wuxuuna fududeeyaa abaabulka iyo isku -dubaridka macluumaadka.
Waa abaabulidda maaddad oo loo geliyo kooxo macno leh oo gaagaaban. Qayb kasta waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah 5-9 shay oo lagu kaydin karo xusuusta muddada-gaaban, sidaasna lagu ballaadhiyo tirada guud ee alaabta la hayn karo.
Tusaalooyinka qumman ee jabaqda waa lambarka taleefanka, taariikhda, taxane kasta oo lambar ah oo aad u dheer in la xafido.
3. Xifdinta qoraallada dhaadheer
Midkani waa kan ugu adag. Waxay u baahan tahay ku celcelin iyo ku celcelin badan. Doonis cad waa cuntada. Tallaabada ugu horreysa waa inaad naftaada barataa qoraalka.
Kor u akhri, gacanta ku nuqul, samee dulmar kooban ama qof kale ha kuu akhriyo. Ugu dambayntii, waxaad heli kartaa habka aad u xifdiso qoraallada aad rabto.
Iyada oo la adeegsanayo Nidaamka PAO, waxaad ku xafidi kartaa tirooyin taxane ah oo fidsan. Inta aan ognahay, PAO waxaa ikhtiraacay kaadhadhka kaadhadhka. Wejiga kaarka kasta wuxuu la xiriiray shakhsiyadda - Boqorada, Boqorada, Jacks, iyo xitaa boqornimada gaarka ah ee waqtiga ku habboon.
Amarka kaararka ayaa si fudud loola xiriiriyay nooc ka mid ah waxqabad. Waa badanaa loo isticmaalo horyaalada xusuusta.
Akhri: 15 Buugga Mahatma Gandhi ee ugu Fiican | 2022 Liiska
Aragtida muhiimka ah ee Moonwalking with Einstein
Socdaalka Moonwking ee Einstein wuxuu ka sheekeynayaa sida Joshua u helay Koobkii Xasuusta Mareykanka, wuxuu la kulmay la -taliyihiisa Ed Cooke oo wuxuu bilaabay safar noloshiisa ah.
XIDHIIDHKA: Barnaamijyada Horumarinta Lacagta sida Dave: Dib -u -eegid Buuxda ee 2022
Laga soo bilaabo meel xoqan, wuxuu horumariyay xusuusta ilaa heer uu ka helo inuu ku tartamo Horyaallada wuxuuna dhigay rikoor cusub oo Mareykan ah oo ku saabsan xifdinta kaararka.
Buugga waxaa loo dejiyay inuu na barayo maareynta xusuusta iyo habab kala duwan oo khuseeya. Sida geeks -ka buuggu waxay u muuqdaan inay meelahooda si nidaamsan u dhigaan khaanadaha.
Hababka aan kor ku soo sheegnay waa kuwo adag, haddana si fudud lagu gaari karo xitaa dadka caadiga ah. Isagoo u imanaya inuu ogaado sida qiimaha leh ee xusuusta dib ugu noqotay waagii, Joshua wuxuu doonayaa inuu si habboon wax noo baro.
Laga soo bilaabo curinta makiinadda daabacaadda ee qarnigii 15aad illaa casrigan casriga ah iyo helidda taleefannada casriga ah, waxaan ku raaxaysannaynaa inaan ogaanno dhammaan xogtayada oo ku jirta jeebkayaga ama bogagga buugga ama majaladda qaarkood.
Laakiin intee in le'eg ayay caqli badan tahay in dhammaan macluumaadkayaga lagu keydiyo gudaha aaladda elektarooniga ah?
Xusuusnow in qalabkani uu xumaado ama jabin karo ilbidhiqsi kasta. Miyuu Foers isku dayayaa inuu hirgeliyo dariiqooyinkan naftiisa si kale oo uu waqti ugu lumiyo iyo sida farsamooyinka mnemonic -ka uga iman karaan
Socod -ku -socodka Dayaxa ee Einstein “waxtar ma u leeyahay bulshada maanta?
Waxaan dhihi karnaa inta badan aqoonteenna maanta waxay ku kaydsan tahay waddo dibadeed ilaa aan ka dadaalno xusuusinta. Foer wuxuu isku dayayaa inuu dhexdeena ku dhexdhigo mabda'a wanaagsan ee ah inaan la iloobin, haddii aan ka hadalno cuntada karinta ama cashar nololeed qiimo leh.
Marka laga hadlayo hal -abuurka madbacadda ee Johaness Guttenberg, taasi waa inay noqotaa meeshii ay ka bilaabatay hoos -u -dhaca xusuustayada caqliga leh.
Dhammaan buugaagtaas, wargeysyada, iyo qaamuusyadaasi waxay u nugul yihiin burbur, laakiin sababta ugu weyn ee jiritaankooda ayaa ah dariiqa aan ku hirgelin karno aqoonta la rabo dhexdeena.
Intii uu jidka ku soo jiray, wuxuu bartay in xusuusta ay aad muhiim ugu ahaan jirtay waagii hore. Hadda ha ka fikirin, laakiin isku day inaad aragto nidaamka waxbarasho ee dugsigeena oo ku tiirsan falkan xusuusta. Dhab ahaantii waxay ka qaadataa barashada qaybta caajiska ah.
Fikradayda liidata ayaa ah in Joshua Foer dadaalkiisa iyo adkaysigiisa ay tahay in lagu daboolo dadaalkeena.
XIDHIIDHKA: Sharks Amaahda Maxaliga ah ma yihiin khiyaano mise sharci? Siraha aad u baahan tahay o Ogow
Buuggani waa mid xiiso leh in siyaabo badan loo akhriyo oo caqli ahaan lagu abaalmariyo. Ku mashquula tacabur maskaxeed saaxiibkiisa fiisigiska.
Ku -socodka Moonin Einstein wuxuu sawiraa sawir isagoo adeegsanaya ereyo aan qiimo lahayn.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan socodka dayaxa ee Einstein
Ma sharxi kartaa cinwaanka buuggaaga?
Socdaalka Mooning ee Einstein waa mnemonic kaas oo ka caawiyay inuu xifdiyo kaararka ciyaarta ee tartan. Waxa uu leeyahay, 'Waxyaalaha la yaabka leh ama midabka leh ayaa ah kuwa ugu xusuusta badan.
Waa maxay Tartanka Xasuusta Mareykanka? Sideed uga qayb qaadatay?
Isagoo sharxaya sida uu ula kulmay Ed Cooke xilligii tartanka kadib markii uu ogaaday in dadka tartamaya badankoodu ay yihiin dad caadi ah. Wuxuu ka shakiyay inay leeyihiin xusuus sawirro leh. Kadib tababarkii uu la qaatay Ed, wuxuu ku soo laabtay horyaalnimada sanad kadib kaliya si uu ugu guuleysto tartanka.
Maxaad ula jeeddaa adigoo leh 'farshaxanka' xusuusta?
Foer wuxuu sheegayaa 'farshaxanka' xusuusta waxaa loola jeedaa dhowr farsamooyin oo laga soo hindisay Giriigii hore. Tusaale ahaan, farsamooyinkii Cicero u adeegsan jiray xafididda khudbadihiisa.
Maxaad ka baratay buugga Moonwalking with Einstein?
Xubin ka mid ah quora wuxuu taxaa casharradiisa sida soo socota:
Inta badan noloshu waa uun xusuus taxane ah, haddaba haddii aadan xasuusan karin, haddaba intee in le'eg ayaad nolosha haysataa?
Nolosha waxaa la xasuustaa marka aad dib u fiirin karto dhacdooyinka xarakaynta leh, sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad abuurto daqiiqado u gaar ah oo aad dib u eegto sida fasaxyada iyo meelaha leexashada.
Qof kastaa wuxuu noqon karaa horyaal xusuusta - waxa kaliya ee ay qaadataa waa barashada xirfadaha ku lug leh iyo rabitaanka inaad geliso shaqada si aad ugu celceliso waxaad baratay.
Ku -tababbarka farsamooyinka xusuusta aasaasiga ah ayaa kaa caawin kara hagaajinta oo noloshaada ka dhigaysa mid hufan.
Maxay xirfadaha buugga Moonwalking with Einstein ka caawiyeen dadka inay gaaraan?
Xubin gaar ah oo ka tirsan Quora wuxuu sheegayaa in borofisarkiisa dugsiga sare uu si toos ah wax u baray konton semester, oo uusan qaadan nasasho. Wuxuu garanayay magacyada arday kasta, wuxuu xusuustay wajiyadooda xitaa tobanaan sano kadib.
Dib -u -eegista Buugga Maareeyaha Daqiiqad | 2022
Dib U Eegista Buugga Shanaad | 2022
Awoodda Soo -koobista Buugga Hadda | 2022 Dib u eegid
7 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Dooxada Stardew sanadka 2022
Lacag Bixin si aad ugu guurto New Zealand sanadka 2022: Hagaha Fudud ee lagu Sameeyo $ 165k
Faallooyinka Genesis Mining 2021: SignUp, Login, Sida ay u Shaqayso | Sharci ama Fadeexad
Macdanta Bitcoin waxay noqotay xirfad aad loo raadsado. Macdanta Bitcoin waxay kasbadaan lacag badan iyagoon iibsan bitcoin…
Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan ka taxaddarno waxa aan ku niraahno khadka. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in adduunka onlineku uu ku siinayo…
Dib -u -eegista Nasiibka leh 2022: Runtii ma ku guuleysan karaa lacag caddaan ah?
Weli ma aragtay faallooyinkii u dambeeyay ee abka Lucktastic? Haddii aadan ahayn, xitaa ha dhibin. Isku dhafka…
Dib -u -eegid lagu kalsoonaan karo 2022: Ma lagu kalsoonaan karaa ma sharcibaa mise waa khiyaano | Sida ay u shaqayso
Halkan waxaa ah dib u eegis lagu kalsoonaan karo oo daacad ah si ay kaaga caawiso inaad barato sida madalku u shaqeeyo. Maqaalkan, waxaan…
Faallooyinka USI Tech 2022: Sidee Sharci u tahay Shirkadda Lacagta ee Crypto?
Mid ka mid ah dhacdooyinka aadka u badan ee maalmahan ayaa ah aasaaska shirkadaha crypto. Intooda badan waxay ballanqaadaan…